Apple TV + mizara horonantsary famintinana ny vanim-potoana 1 an'ny The Ghost Writer | Avy amin'ny mac aho
Apple TV +, toy ny serivisy video streaming hafa, dia manolo-tena amin'ny atiny ho an'ny ankizy, ampahibemaso, izay rahateo no manana fotoana malalaka indrindra hankafizana ireo sehatra ireo. Ao anatin'ny atiny ho an'ny ankizy, hitantsika ny andiany Mpanoratra Ghost, andiany iray izay vao nanomboka ny dingana faharoa.
Mba hahafahan'ny zandriny mankafy amin'ity vanim-potoana faharoa ity, nefa tsy mila mampatsiahy azy ireo hoe inona ilay andian-tantara sy ny fomba nankafizin'izy ireo azy, avy amin'ny fantsona YouTube an'i Apple, nandefa horonantsary famintinana ny zava-nitranga rehetra tamin'ny vanim-potoana voalohany, horonantsary izay, na dia amin'ny teny Anglisy aza izy ireo dia afaka manampy dikanteny mba hahamora ny fitadidian'ny ankizy kely.
Na dia marina aza fa natao ho an'ny ankizy sy ny tanora ny andiany, dia andiany iray izay afaka mahita tsara amin'ny zanatsika isika Ary izany dia azo antoka fa hampahatsiahy antsika ireo sarimihetsika nofinofy izay hitantsika tamin'ny fahazazantsika, izay ninoantsika fa nisy zavatra azo natao.
Mitantara amintsika ny momba ny matoatoa miseho ao amin'ny fivarotam-boky manodidina ny matoatoa, matoatoa iray izay mamoaka endri-tantara foronina amin'ny tontolo tena izy. Ireo tanora efatra izay ao anatin'ny andiany, miara-mivory hamaha ny olana miandry izay ananan'ny matoatoa.
Ny vanim-potoana voalohany amin'ny andiany Mpanoratra Ghost nandresy tamin'ny loka Emmy Daytime amin'ny Fandaharana Miavaka ho an'ny atin'ny Ankizy na ny Fianakaviana ary nahazo fanendrena 16 amin'ny fifaninanana samy hafa, na dia tsy misy na dia iray aza manan-danja kokoa noho ny Emmy ho an'ny fandaharana nalefa mandritra ny andro.
Ny vanim-potoana voalohany dia misy Fizarana 13 maharitra 25 minitra eo ho eo ary izy rehetra dia misy ampahany 2 na 3, ka raha tsy milamina ny zanatsika dia tsy mila mitazona izany isika notànana amin'ny seza mandritra ny adiny iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple TV + dia mizara horonantsary famintinana ny vanim-potoana 1 an'ny The Ghost Writer